Wax walba oo aad ku sameyn karto Windows Connection iyo Galaxy Note10 | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Samsung
La Samsung iyo isbahaysiga Microsoft waxay ku bixinayaan Windows Connection Galaxy Note 10 + oo lagu daray barnaamijkaas Taleefankaaga ayaa noo oggolaan doona inaan qaadno xiriirka ka dhexeeya moobiilkeenna iyo kombuyuutarkeenna heer kale.
Telefoonada ka soo wac laptop-ka, nuqul ka dheji labada qalab dhexdoodaDegdeg ah, file wadaaga ah oo labadiinaba udhaxeeya, hubinta ogeysiisyada, fariimaha SMS, iyo xitaa muraayadda shaashadda moobiilka waa astaamahaas aad u fiican. Aynu u nimaadno (oh, oo ha moogaan fiidiyaha muujinaya dhammaantood).
1 Telefoon ayaa lagugu wacaa Windows 10 PC-gaaga
2 Nuqul oo dhaji inta udhaxeysa laba qalab
3 Ku wareeji sawirada isla markiiba Sawirada
4 Muraayada moobiilka
5 Hubi ogeysiisyada iyo SMS
Telefoon ayaa lagugu wacaa Windows 10 PC-gaaga
Markii aan ku xirno Xiriirinta Windows-ka taleefankayagu wuxuu ka dhex-shaqeynayaa kombuyuutarka barnaamijka leh Taleefankaaga ku jira Windows 10. Waa inaan isticmaal isla isla xisaabta Hotmail in la isku daro labada qalab. Mid ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan waa taleefoonnada.
Kuxiran Bluetooth, iyo a cusub oo yimid bishii Diseembar ee sanadkii hore, waxaan awoodi doonaa inaan sameyno oo aan ka helno wicitaano dhamaan raaxada uu laptopkeenu ka dhigan yahay. Waan shaqeyneynaa oo wicitaanku wuxuu ku yimaadaa si makarafoonkiisa iyo kuhadalkiisa, aan ugu raaxeysanno wicitaanadaas adigoon taleefanka ka qaadan.
Nuqul oo dhaji inta udhaxeysa laba qalab
Hawl kale oo aad u fiican ayaa ah inaad nuqul ka sameysato oo aad ku dhejiso mobilada iyo kombuyuutarka. Waxaan leenahay shaqadan ka hawl geli dejimaha barnaamijka taleefankaaga ee Windows 10. Marka la hawlgeliyo, waxay noo ogolaaneysaa inaan nuqul ka sameysano oo aan dhajinno labada qalab dhexdooda.
Taasi waa, haddii aan ku aragno xiriiriye degel ku yaal mobilka, waxaan nuqul ka qaadanaa URL-ka oo toos ayaan ugu dhejisanaa laptop-ka si aad uga hesho shaashadda ugu weyn isla. Isla sidaas ayaa ku dhici doonta qoraalka iyo in ka badan. Hawl muhiim u ah la shaqeynta kombuyuutarkayaga iyo mobilkaaga.
Ku wareeji sawirada isla markiiba Sawirada
Tan iyo markii aan hawlgeliyay xiriirka ka dhexeeya mobilkeyga iyo Windows 10 horeyba Uma baahni barnaamij dhinac saddexaad ah. Kaliya waxaan qaadanayaa shaashadda shaashadda moobiilka iyo ipso facto waxay ka muuqataa shaashadda laptop-ka. Fudud sidan.
Laga soo bilaabo barnaamijka taleefankaaga ee Windows 10 waxaan haynaa qaybta sawirada si aan uga helno. Tani waxay kuu oggolaaneysaa dhammaan noocyada waxtarrada ee aadan xitaa u baahnayn inaad taxato. Sawirka aan rabno ayaan jiideynaa oo aan uga tagnaa dusha desktop-ka kombiyuutarka. Fudud, dhakhso leh oo hufan.
Oo haa xitaa ma dooneyno inaan shidno mobilka Waxaan ku heli karnaa iyadoo la adeegsanayo shaashadda Taleefankaaga. Waxay u shaqeysaa si aad u fiican si aanan ilbiriqsi ugu khasaarin.
Waxaan xitaa leenahay shaashadda qufulka iyo waxa aan qabanno isla markiiba ayaa lagu soo saari doonaa taleefanka.
Hubi ogeysiisyada iyo SMS
Faa'iido kale oo weyn ayaa ah inaad ka hubiso farriimaha SMS-ga taleefankaaga. Dhammaantood waa faa'iidooyin waxaana ku laabaneynaa isla sidii aan u lahayn daar shaashadda si aad u aqriso fariimaha oo xitaa uga jawaabaan iyaga.
Ku saabsan ogeysiisyada, xitaa waan awoodnaa go'aamiso barnaamijyada aan dooneyno inaan firfircoonaanno si loo wada naco. Haddii aan si xirfad leh u sameyno, qaar waan ka takhalusi karnaa oo waxaan ka tagi karnaa kaliya kuwa la xiriira howlahayaga shaqada.
Waxaan haynaa taxane kale oo taxane ah oo aan ku dhejineyno waraaqda moobaylka ee isku midka ah barnaamijka Taleefankaaga ama isticmaal astaamaha barnaamijka si aad u aragto ogeysiisyada. A shaqo weyn oo ay qabteen Samsung iyo Microsoft ee Windows raac nidaamka ugu fiican ee shaqada iyo meelaha ugu wax soo saar badan. Weli waxaa harsan waddo dheer maxaa yeelay warar dheeri ah ayaa goor dhow imaan doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » [VIDEO] Tani waa sida Loogu xidhayo Windows-ka Galaxy Note10 +: wicitaano, nuqul / dheji iyo inbadan
Rumble Hockey waa ciyaar aad u xiiso badan oo ciyaar badan oo udhaxeysa 2 ciyaartoy